FAMPAHALALANA SY SARY POCKET PITBULL - ALIKA
Fampahalalana sy sary Pocket Pitbull
Patterdale Terrier / Alika Amerikanina Pit Bull Terrier Miora
Lucy the Pocket Pitbull (Pitterdale) amin'ny faha-5 taonany— 'Ity i Lucy, ny APBT x Patterdale na' Pocket Pit 'ahy. Toa kely dia kely izy amin'ny ankapobeny lalao niteraka Pit Bull. Izy dia tena manan-tsaina, be trainable, manana finiavana mafy hampifaly, dia entin'ny hazaina ary manana fahalemem-panahy mandritra ny andro maro. Alika tsara izy ary mihetsika, hiady amin'izay rehetra mijery ny tsy nety nataony ary mankahala vehivavy hafa. Tsy taolana ratsy ao amin'ny vatany raha resaka olona ary adala amin'ny ankizy izy. Alika miasa kokoa noho ny 'biby' izy, matanjaka be ary entina, saingy miaraka am-pitiavana, fiofanana ary fampihetseham-po be dia be dia lasa alika kely trano. Raha fintinina dia olon-tiany tanteraka amin'ny olona izy ary biby goavambe amin'ny fomba hafa rehetra. Ny paosy paosy dia tsy an'ny olon-drehetra, fa alika kely mahafinaritra izy manana fo vita amin'ny volamena. '
Pocket Pitbull dia tsy alika madio. Lakroa misy eo anelanelan'ny Patterdale Terrier ary ny American Pit Bull Terrier . Ny fomba tsara indrindra hamaritana ny toetran'ny karazany mifangaro dia ny mijery ireo karazana rehetra ao amin'ny hazo fijaliana ary fantaro fa afaka mahazo mitambatra amin'ny iray amin'ireo toetra hita ao amin'ny karazany roa ianao. Tsy ireo alika hybrid mpamorona rehetra ireo no noompiana fa 50% purebred ka hatramin'ny 50% purebred. Tena mahazatra ny mpiompy ny miompy lakroa misy taranaka maro .
Lucy the Pocket Pitbull (Pitterdale) amin'ny 5 taona
Mumphy the Pocketpit (Pitterdale) amin'ny 2 taona— 'Mumphy ao amin'ny tokotaniny. Ity karazany ity, araka ny hevitro dia iray amin'ireo alika marani-tsaina indrindra sy mpankato izay nahafaly ahy. Lehilahy kely henjana koa izy ka aza manaiky hofitahina amin'ny habeny. Ny reniny dia Patterdale 12-kilao. Ny rainy dia Jeep RedBoy Rascal Pitbull 38 kilao. '
Mumphy the Pocketpit (Pitterdale) amin'ny 2 taona
'Mumphy dia Pocketpit (Pitterdale). Ny reniny dia Patterdale 12-kilao. Ny rainy dia Jeep RedBoy Rascal Pitbull 38 kilao. Mumphy dia alika mahagaga. Mihanika hazo izy ary mitsambikina eo ambonin'ny lohanao. Afaka mihantona kodiarana mandritra ny adiny roa izy. Izy no manana ny alika haza be indrindra an'ny alika rehetra nananako. '
sarina zanak'alika amerikanina mpampijaly
Alika kely pitbull 2 ​​volana
sarin'ny alika rano portuguese